I-Apple ikhupha iBeta yesibini ye-iOS 10 yaBaphuhlisi | IPhone iindaba
UApple ukhupha i-beta yesibini ye-iOS 10 yabaphuhlisi
UPablo Aparicio | | iOS 10
Ekugqibeleni. Ukuthathela ingqalelo ukuba abaphuhlisi banakho ukufumaneka ukusukela nge-13 kaJuni, akubangakho nto imangalisayo: I-Apple isungule imizuzu embalwa edlulileyo IOS 10 beta 2 yabaphuhlisi. Ukuphehlelelwa kwenzeke kwiintsuku ezingama-22 emva kwe-beta yokuqala kwaye ngolwesiBini, umhla apho iCupertino ihlala iqala iinguqulelo ezintsha. Sele ikhona kwiziko lonjiniyela le-Apple okanye nge-OTA, oko kuthetha ukuba iya kubonakala kubo bonke abasebenzisi, abaphuhlisi okanye hayi, ababene-beta yokuqala efakwe kwi-iPhone, iPod Touch okanye kwi-iPad.
Inguqulelo yoluntu ayikafiki. Njengoko u-Apple wabhengeza kwi-WWDC, ingxelo yabasebenzisi abangaphuhlisi iya kufika ngamanye amaxesha ngoJulayi, ngokunokwenzeka iiveki ezimbini ukusukela ngoku. Kwithiyori, le beta yenzelwe abaphuhlisi kuphela, kodwa njengakwiinguqulelo zamva nje, nawuphi na umsebenzisi ofaka iprofayili yesoftware ye-beta kwi-iPhone yabo uya kuba nakho ukufaka olu hlobo. Ayinakufakelwa nge iTunes Ngaphandle kokuba ufake i-Xcode 8 beta.
IOS 10 beta 2 ngoku iyafumaneka
Ukusuka kumagqabantshintshi abafundi beendaba ze-iPhone kunye nezinto endikwazileyo ukuziqinisekisa, ibeta yokuqala ye-iOS 10 isebenza ngcono kakhulu kunokuba bekulindelwe. Inxalenye yolu phuculo kunokwenzeka ngenxa yeApple khange ibethele ikernel IOS 10. Ngapha koko, esinye sezizathu abantu baseCupertino abasinike ukungabhaleli i-kernel yohlobo lwamva nje lwenkqubo yabo yokusebenza yeselfowuni kukuphucula ukusebenza kwenkqubo yonke.
Njengoko sihlala sisitsho, asikukhuthazi ukufakwa yale beta okanye nayiphi na enye isoftware kwisigaba sokuvavanya ngaphandle kokuba uyenza usazi iingozi ojamelene nazo, ezinokuthi zibe kukuvalwa okungalindelekanga, ukusetyenziswa kakhulu okanye ukungazinzi ngokubanzi. Ukuba ngaphandle kwayo yonke into ogqiba ukuyifaka, ungathandabuzi ukushiya amava akho kwizimvo. Siza kuzama ukufumanisa malunga nazo zonke iindaba eziza ne-iOS 10 beta 2 kwaye siya kwazisa ngazo zonke ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 10 » UApple ukhupha i-beta yesibini ye-iOS 10 yabaphuhlisi
Amawijethi omntu wesithathu ajongeka emhle! Iwijethi yeendaba ikwabonakele kodwa hayi iApp! Kwaye ngoku ngokushenxisa izaziso kwi-springboard ungatyibilika uye ngasekunene kwaye ubone iiwijethi! Ngaba ukhona umntu okhe wabona ezinye iindaba ???
I-Keyner Afanador sitsho
Kwi-iPhone 6s yam kukho uzinzo olungcono kunye nokuchachamba kwenkqubo. Kukhawuleza kakhulu, ukuza kuthi ga ngoku ayikaqali kwakhona njengoko kwenzekile ngeBeta 1. Ukongeza, kukho phantse i-600 MB ethi iBeta 2 izise.
Ukuza kuthi ga ngoku kulungile, Apple.
Phendula kwi-Keyner Afanador
UDelby Pichardo sitsho
Ndiyabulisa, ucinga ukuba i-Apple izakuyivula nini i-beta yoluntu?
Phendula kuDelby Pichardo
Kwakhona xa uvula i-iPhone iqhaga lisiya ecaleni kwaye igama elithi Unlocked liyavela, ngaphambi kokutshixeka kuphela
URafael Pazos obambe umfanekiso sitsho
Sinoluhlobo lwe-3D Touch xa usilayisha izaziso, inyani kukuba ipholile Hahahaha! Inye kuphela into ephumayo kukuchukumisa i-3D ebonakalayo kwiZiko leSaziso !!!
Imibuliso ithunyelwe ivela kwi-iPhone 6 ene-iOS 10 beta 2 !!
Phendula kuRafael Pazos
UHector Sanmej sitsho
UThixo ukuvile Paul !!! Ekugqibeleni !!!!!! 😀
Phendula Héctor Sanmej
Uyabona. Xa befumanise ukuba iqela lokukhangela nelokuhlangula liza kukhokelwa nguChuck Norris, bacofa iqhosha le-xD
I-Apple isungula i-beta yesibini ye-tvOS 10 kunye ne-watchOS 3.0
Monster Hunter Freedom Unite ubuyela kwiVenkile ye App kwaye uthathe ithuba lokuyihlaziya